Xaaska madaxweynihii Interpol oo carruurteeda la baxsaneysa - BBC News Somali
Xaaska madaxweynihii Interpol oo carruurteeda la baxsaneysa
Image caption Grace Meng waxay wajigeeda ka ilaalisaa Kaamirada
Haweeneyda u dhaxday madaxweynihii booliska adduunka ee Interpol, Meng Hongwei, oo tan iyo bishii Sitembar ku xiran dalka Shiinaha, ayaa magangalyo siyaasadeed ka dalbatay waddanka Faransiiska, si loo sugo amniga iyada iyo labadeeda carruurta ah, oo mataano ah.
Madaxa Booliska adduunka oo la waayay
Shiinaha: Baadhitaan ayaan ku haynaa madaxa Interpol
Bishii Oktobar ayey mas'uuliyiinta dalka Shiinaha sheegeen in Mr Meng lagu wado baaritaanno ku saabsan laaluush-qaadasho lagu tuhmay.
Idaacadda France Inter, oo maanta oo Jimce ah wareysatay ayaa sheegtay iney tiri, "Waxaan ka baqayaa iney i afduubtaan".
"Waxaa taleefanno iga soo wacay dad aanan garaneyn. Xitaa gaarigeyga waa la waxyeelleeyay. Labo qof oo shiineys ah, nin iyo haweeney, ayaa i daba socday ilaa inta aan hoteelka ka imaanayay", ayey tiri.
Maalintii seygeeda la waayay, waxay sheegtay inuu barta xiriirka bulshada ugu soo qoray farriin uu ku leeyahay "I sug int aan kusoo wacayo", markii dambena wuxuu u soo diray sawir mindi ah oo muujinaya inuu khatar ku jiro.
Image caption Mr ayaa la la'yahay tan iyo bishii Sitembar
Xaaskiisa Waxay iyadu aaminsan tahay in uusan nooleyn.
"Ma jirin wax sabab ah oo aan uga shakiyo in wax la khasbay ama ay si khalad ah ku dhaceen" ayuu yiri xog hayaha guud.
Hay'adda booliska caalamiga ah ee dambiya adduunka ayaa magaalada Vienna ee dalka Austria lagu aasaasay sannadkii 1923-kii, waddamadii ugu horreeyay ee xubnaha ka ahaana waxaa ka mid ahaa Jarmalka, Faransiiska iyo Shiinaha.